Virginity fraud အပျိုရည် ပျက်ခြင်း(အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၆)) ~ Myanmar Forward
Virginity fraud အပျိုရည် ပျက်ခြင်း(အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၆))
Posted by drmyochit Tuesday, March 19, 2013, under ဆောင်းပါး | 8 comments
မိန်း ကလေး တယောက် ကနေ အကျိုးတခုခုကို မျှော် ကိုးပြီး မမှန်ဘဲနဲ့ အပျိုစစ်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက် တာကို Virginity fraud အပျိုရည်- လိမ် တယ်၊ Virginity lie အပျိုရည်-မုသား နဲ့ Chastity fraud အဗြဟ္မစရိယ-အ ကျင့် လို့လဲ ခေါ် တယ်။
Paternity fraud မိဖ မစစ်ဘူးဆိုတာလိုဘဲ ဒီ အယူအ ဆဟာလဲ ငြင်းခုန်စရာ တခုပါဘဲ။ အပျို စစ်-မစစ်ရဲ့ Definition အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မှု နဲ့ Importance အရေးပါမှု ဆိုတာကို လူ့အသိုင်း အဝိုင်းမှာ တသဘော ထဲ မရှိပါ။ Sexual double standard ကျား-မ နှစ်ခွအမြင် ရှိတာနဲ့ မရှိတာမှာ ကွာကြ တယ်။
Female virginity အပျိုစစ်မှုကို
1. Hymen အပျိုမြှေး ရှိတာ-မရှိတာနဲ့ တိုင်းမလား။
2. Philosophical criteria ဒဿနိက-သတ်မှတ်ချက်ကော ထားမလား။
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေက မတူကြပါ။ Rape victim အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူမျိုးကို အကဲဖြတ်တာတော့ တူကြတာ များပါတယ်။ မိန်းကလေး တယောက် Boyfriend ယောက်ျားလေးအဖေါ် ထားပြီဆိုကတည်းက (လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိအုံးတော့) တန်ဘိုး သတ်မှတ်မှုမှာ အမှတ် လျော့ခံရပြီ။ Lesbian sexual activity မိန်းကလေးချင်းချင်း လိင်ကိစ္စထိ ရောက်ကြအုံးတော့ စောစောက မိန်းကလေးလောက် အမှတ် မလျှော့တတ်ဘူး။
ရှေးခေတ်လို့ ပြောရမယ်၊ ခုခေတ်လဲ ရှိတော့ ရှိသေးတာပါ၊ မင်္ဂလာဦးညမှာ အိပ်ယာခင်း၊ အဝတ်အစားမယ် ကညာမြှေးစုတ်လို့ ထွက်တဲ့ သွေးစွန်းတာ လက်တွေ့ မြင်ရမှသာ သတို့သမီးဟာ အပျိုစစ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတာရဲ့ Proof သက်သေခံ ဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်ကို Marriage contract မင်္ဂလာဆောင် (ကန်ထရိုက်) စာချုပ်ကတည်းက တည့်ထားတတ်တယ်။ ဘယ်ရမလဲ လူဆိုတာ ကြံရည်-ဖန်ရည် ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ခေတ်လူတွေမှ တော်ကြတယ် မထင်ပါနဲ့။ Techniques to simulate the bleeding သွေးအတု လုပ်နည်းတို့ Physical sensation of rupture စုတ်ပြဲသွားလို့ နာကျင်မှု အယောင်ဆောင်တို့ ဆိုတာတွေလဲ ရှေးကတည်းက ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
1. Hymen restoration surgery အပျိုမြှေးကို ခွဲစိတ်ကုသပြီး ပြန်လုပ်ပေးထားသလား။ Vagina's general state of elasticity ပုံမှန်ရှိအပ်တဲ့ (ဗဂျိုင်းနား) ရဲ့ ကြုံ့နိုင်-ဆန့်နိုင်စွမ်း ရှိသလား-မရှိဘူးလား ဆိုတာတွေ စစ်တာကို လူမျိုးစု အတော်များများမှာ ဆရာဝန်တွေက လုပ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အများလက်ခံတဲ့ အမျိုးလဲတော်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး တဦးဦးကနေ လုပ်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆရာဝန်တွေကို သုံးလာတာလဲ ရှိပါတယ်။ ဆေးလက်မှတ် ထုတ်ပေးဘို့ လိုတတ်လို့ပါ။
2. ဆရာဝန်နဲ့ မလုံလောက်ရင် "စုံထောက်" အားကိုးကြတာလဲ ရှိတယ်။ Private detective တွေက မိန်းကလေးရဲ့ သမီးရည်းစားထား သမိုင်း ပြန်လှန်မယ်။ သွားဘူး-လာဘူးတဲ့ ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေ လိုက်စုံစမ်းမယ်။ မပေါ်ပေါ်အောင် ဖေါ်မယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ Hymen replacement surgery အပျိုမြှေးပြန်လုပ်ပေးတာကို ဝေဖန်လာကြတယ်။ Medically unnecessary ဆေးပညာအရ မလိုအပ်ဘူးတဲ့။ လူတွေ အဲလို လိုက်လုပ်ကြတဲ့ Social practices အလေ့အထက မကောင်းဘူးလို့ ပြောတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ဒီနည်းကြောင့် အပျိုမဟုတ်သူတွေက အပျိုတု လုပ်လာပါတယ်။
ပြဿနာ များတာက မွတ်ဆလင်တွေမှာ ဖြစ်မယ်။ ၂ဝဝ၆ တုံးက ပြင်သစ်နိုင်ငံ Lille မှာနေတဲ့ သတို့သားက သူ့ သတို့သမီးကို အပျိုမစစ်လို့ မယူတော့ဘူး ငြင်းခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးကလဲ စစ်ပါတယ်ပြောပေမဲ့ အယူခံ မတက်တော့ ယောက်ျားလုပ်သူက အနိုင်ရလိုက်တယ်။
၂ဝဝ၉ ရောက်တော့ မီဒီယာ အာရုံစိုက်မှုများတဲ့ကြားကနေ တရားရေးဝန်ကြီး Rachida Dati က အစိုးရကို အယူခံဘို့ အမိန့်ချလိုက်တယ်။ အယူခံတရားရုံးက အရင်အမိန့်ကို ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ လက်ထပ်တာမှာ အပျို စစ်-မစစ်ဟာ Essential condition မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် မဟုတ်လို့ ချမှတ်ထာ ဖြစ်တယ်။
မိန်းကလေးက မုသားဆိုအုံးတော့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝအတွက် အပျိုရည်ပျက်လဲ ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။ သူ့အတိတ်ဟာ အတိတ်ဘဲတဲ့။
Myanmar Daily News မှ ဗဟုသုတ အဖြစ်တင်ပြပေးသော ဆောင်းပါးအား Myanmar Forward မှ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
tun min lat said:
13 April 2013 at 15:55:00 GMT+6:30
11 May 2013 at 10:15:00 GMT+6:30
နောင်လဲ အိုမှာပဲ လေ ကျော်ဟိန်းပြောသလိုပေါ့ ကိုယ်မဖတ်ရသေးတဲ့စာအုပ်ဟာ အသစ်တဲ့
11 May 2013 at 10:53:00 GMT+6:30
စာအုပ်အသစ်က ကိစ္စမဟုတ်ဘူး အပေါက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ညားမိမှာစိုးလို့ပါ
Nyi Khantnaung said:
27 May 2013 at 23:14:00 GMT+6:30
8 June 2013 at 15:01:00 GMT+6:30
အလွယ်လို လမ်းအိုလိုက်တဲ့ ....
နားလည်းဖို့ဦးစားပေး..ပါ...
ဒါပေမယ့် အသစ်ကလေးက လည်း တသက်တာအတွက်ပါ...
9 November 2013 at 00:25:00 GMT+6:30
9 November 2013 at 00:29:00 GMT+6:30
15 December 2013 at 23:10:00 GMT+6:30
ကိုယ့်မိန်းမ ကလွဲရင် ကျန်တဲ့မိန်းမတွေက အသစ်လေးလိုပါပဲတဲ့ ( ကောင်းတယ်)
ပတ်စ်ပို့ (passport) တွေ လုပ်ရာမှာ ၁၄ ရွက်ဖြည့်ရာက...
*** အဖေ ဘင်္ဂလီ အမေ ဘင်္ဂလီ သားသမီး ရိုဟင်ဂျာဆိုပဲ*** ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် နှစ်ခုမှ ပိုင်ရှင...
“မျက်မမြင် မိခင်အား လုပ်ကျွေးနေသူ မိန်းကလေး တစ်ဦး ...
ဟမ်းဖုန်း နှစ်လုံး ပျောက်ပြီး ခွေးကိုက် ခံလိုက်ရတဲ...
စစ်တွေ ၀န်ကြီးများ အိမ်ရာအနီးမှာ ဘင်္ဂလီများသတ်ပုတ် ...
ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ လဲလှယ်ခံရမှုကြောင့် အဓိပ္ပါယ်များ...
ဓါးထိုးသတ်ခံရ ကျားဖြူဥက္ကဌ တူ အမှုကို မတ်လ ၂၂ ရက် နေ...
NOK AIR ကို အောင့်ကာနမ်းနေရတဲ့ မဲဆောက်
၄၉ ကြိမ်မြောက် ဆုရအနုပညာဓာတ်ပုံပြပွဲ (ဓါတ်ပုံသတင်း...
စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင...
ဟန်ဝင်းအောင် အကြောင်း ထောင်အတူကျခဲ့ဖူးသူ ဖွင့်ချ
မြောက်ဦးမြို့တွင် ဘင်္ဂလီများနှင့်ပူးပေါင်းကာ စီးပွာ...
Samsung Galaxy S4ကို စင်္ကာပူတွင် မေလအတွင်း ၀ယ်ယူန...